७ दिन सम्म यसो गर्नुभयो भने कहिले पैसाको कमि हुने छैन, जानी राखौ… - Enepal Serofero
दीपक निभीसकेपछि यदि तेल बाकी रह्यो भने उक्त तेललाई सान्ध्यको समयमा पिपलको वृक्षमा चढाईदिनुहोस।
७ शनिबारसम्म लगातार यसो गर्नाले धनको कमि हुदैन। यसो गर्नाले तपाइको हातमा पैसा सधै टिकीरहन्छ।
एजेन्सी । हामीले अधिकांश समयमा कुकुरहरु ले रुखको फेँदमा या त गाडीको टायरमा पिसाब फेरेको देख्छौँ । हाम्रो लागि यो निकै सामान्य कुरा हो ।तर के तपाईले यसको कारण बारे जान्ने कोशिस गर्नु भएको छ ? छैन भने आज हामीले तपाईलाई यसको विशेष कारण बारे बताउन गइरहेका छौँ ।
कुकुरलाई पिसाब फेर्ने जति नै धेरै ठाउँ दिए पनि उनीहरु रुख, गाडी, पर्खाल या त कुनै यस्तै ठाडो वस्तुमा पिसाब फेर्ने गरेको देखिन्छ ।
यसको पछाडी एउटा तार्किक कारण छ । वास्तवमा कुकुरहरु आ-आफ्नो इलाकामा बस्ने प्राणीहरु हुन् । यिनीहरु ले यस्तो ठाउँमा पिसाव फेर्छन्, जो सधैँ ठाडो अवस्थामा रहेको हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा कुकुरहरु सधैँ आफ्नो नाकको उचाइमा पिसाब फेर्छन् ।
ताकि उनीहरु अन्य कुकुरहरुको लागि आफ्नो गन्ध छोड्न सकुन् । यसबाट उनीहरुले अन्य कुकुरलाई यो मेरो इलाका हो भनेर चिह्न छोड्ने गर्दछन् ।
यसैकारण नै कुकुरहरु सधैँ एउटा खुट्टा उचालेर रुख, गाडी, पर्खाल वा पिल्लरमा पिसाब फेर्छन ।
Prevभोलि माघ १० गते बिहिबार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
Nextरातको तेस्रो प्रहरमा किन हुन्छन् मृत्युका घटना पुरा पढ्नुहोस् ?
मगर्नी भाउजूको कथा (13,536)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,063)